amakesi namakhava amahle kakhulu we-apple ipad 2020 (8th generation)
none Izindaba Nokubuyekezwa Amacala nezembozo ezihamba phambili ze-Apple iPad 2020 (8th generation)
Amacala nezembozo ezihamba phambili ze-Apple iPad 2020 (8th generation)
Ngisho naku-2021, i-apula Isabelomali sesizukulwane sesi-8 i-iPad ngokusobala iyithebhulethi esezingeni eliphansi kakhulu ongayithenga, okungenani kuze kube ukufika kwayo okulandelayo ngoSepthemba. Uma ukhethe ukukhetha i-intshi engu-10.2 I-2020 iPad (isizukulwane sesi-8) futhi wena ekuzingeleni icala elikhulu, ukuhlinzeka ngokuvikela futhi wenze ithebhulethi yakho isebenze kahle futhi ibe nesitayela, wena & apos; sendaweni elungile! Ake sibheke amacala amahle kakhulu atholakalayo we-10.2-inch iPad kuzo zombili i-apula nabantu besithathu abahloniphekile.
I-Apple iPad (2020) $ 32999 Thenga kwaBestBuy $ 15 Thenga kwaVerizon $ 153. 4 Thenga ku-AT & T
I-Apple Smart Cover ye-iPad (isizukulwane sesi-8)
Akukho okuhlula ukwakheka okuvivinywe isikhathi kwe-Apple & apos; eyakhe i-Smart Cover. Njengoba bekulindelekile, i-Smart Cover ayikwazi ukuhlukaniswa naleso se-iPad 7. Isona sisekelo esincane, ikhava kazibuthe engashintsha ibe yindawo ye-iPad yakho, yenze ukubuka amavidiyo noma ukubamba izingcingo zamavidiyo kungenazandla ngokuphelele kwakho. Lesi sikhwama kulula ukusisusa, njengoba singena kwi-iPad ngamazibuthe, futhi siphinde sivuse i-iPad yakho noma siyenze silale lapho uyivula futhi uyivala.
Into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi leli khava alihlinzeki ngokuvikelwa emuva kwe-iPad & apos, ngakho-ke uma & # 8226; & # 8195; ngemuva kokuklwebheka ekugcineni noma ukulahla ukuvikelwa, qhubeka uskrola. Ngaphandle kwalokho, uma & apos; ngemuva kokulula, okuncane futhi okulula, okulula ukunamathisela nokukhipha ikhava nokuma - i-Apple Smart Cover ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Kubuye kube nemibala ehlukahlukene emnandi ngaphezu kokumnyama nokumhlophe okuyisisekelo, kufaka phakathi iCyprus Green, i-Deep Navy, i-Pink Citrus neCactus.
I-Apple - Isembozo Esihlakaniphile se-Apple® iPad® 10.2 '(8th Generation 2020)
$ 49Thenga kwaBestBuy
Ikhibhodi ye-Apple Smart ye-iPad (isizukulwane sesi-8)
Ngokufanayo ne-Smart Cover, lena inamathela kalula ku-iPad ngamazibuthe futhi ingayiphakamisa. Kepha, futhi uthola ikhibhodi ethambile yesayizi ephelele, eguqula i-iPad yakho ibe yikhompiyutha enhle futhi engasindi, elungele umsebenzi wesikole nezinye izimo ezibandakanya ukuthayipha okuningi.
Futhi ngezikhathi lapho ungadingi khona ikhibhodi, usengayisebenzisa njengestandi noma ikhava yesikrini, kungenjalo ungayikhipha kalula kwi-iPad yakho ngokuphazima kweso. I-Smart Keyboard & apos; s slimness kanye nokusetshenziswa kalula akukwazi ukwedlulwa, futhi akufani nalokhu ku-iPad. Kodwa-ke, inezinto zayo ezingezansi, njengama-engeli wokubuka amabili kuphela futhi akukho ukukhanya okukhanyayo.
I-Apple - Ikhibhodi Ehlakaniphile ye-iPad (Isizukulwane sesi-8)
$ 159Thenga kwaBestBuy
Icala le-OtterBox Symmetry Series ye-iPad (isizukulwane sesi-8)
Leli cala elicacile futhi elingasindi elenziwe ngopulasitiki oqinile nosilicone livikela ama-iPad & ama-apos; emhlane nasezinhlangothini zakho emaconsi nasemiklwebheni. Ingaphinde inanyathiselwe kwi-iPad yakho eceleni kwe-Smart Keyboard ne-Smart Cover esikubalile ngaphambilini, engeza ukuvikelwa kwayo okwengeziwe kumxube ngaphandle kokuba sendleleni.
Leli cala liphinde lisebenzele umnikazi ofanele wePensela ye-Apple, futhi lihlolwe kakhulu kwi-MIL-STD (Military Standard) ukuvikelwa okwehliswayo kusuka ezinyaweni ezi-4.
Ilula futhi icacile, ikesi le-OtterBox Symmetry Series livikela kakhulu i-iPad yakho
Ikesi lekhibhodi yeLogitech Combo Touch ngeTrackpad ye-iPad (isizukulwane sesi-8)
Manje siyakhuluma! Uma uzimisele ukunikela ngefomu lakho elincanyana nelikhanyayo le-iPad & apos yakho ye-kickstand enkulu, ikhibhodi ekhanyisiwe, i-trackpad, kanye nomnikazi wepensela le-Apple kwiphakeji elilodwa - leli yicala elihle kakhulu laphaya le-iPad yakho engu-8. ingacisha ngisho nengxenye yekhibhodi futhi imane isebenzise i-kickstand ne-case, njengoba ihlukile kuyo.
Vele, leli cala lingelabo kuphela abadinga konke lokho okungeziwe. Kunoma ngubani omunye umuntu, akunangqondo, ngoba kungeza inqwaba ebalulekile kwi-iPad yakho, futhi nayo ayibizi kakhulu. Leli ikhibhodi nekesi le-trackpad lomsebenzisi wamandla we-iPad, isitshudeni, noma umuntu othanda kakhulu ofuna i-iPad 8 ukuthi ibe yikhompiyutha yabo.
I-Logitech - Ikesi lekhibhodi ye-Combo Touch ye-Apple® iPad® 10.2 '(7th no-8th Gen)
$ 14 isephulelo (9%)$ 13599$ 14999 Thenga kwaBestBuy
I-Spigen Rugged Armor Pro ye-iPad (isizukulwane sesi-8)
ISpigen iphakathi kwemikhiqizo engcono kakhulu nethenjiwe ongaya kuyo, lapho ufuna amacala amangelengele wezingcingo namathebulethi. Leli cala, elenzelwe i-iPad 8 nele-7, linemininingwane ecwebezelayo ye-carbon fiber kanye nesiphetho esimnyama esimnyama, futhi lifaka i-Spigen & apos; s Air Cushion Technology yokutholakala kokushaqeka kwansuku zonke.
Ngaphandle kokunikeza ukuvikeleka okuqinile kwe-iPad 8 yakho iphakethe elibukeka kahle, leli cala futhi linesiphathi se-Apple Pencil esakhelwe ngaphakathi nesitendi, esingaxhasa i-iPad yakho ngokubuka ama-movie angenazandla, izingcingo zevidiyo noma ukudweba okunethezeka kwe-Apple Pensela izikhathi.
I-Spigen Rugged Armor Pro
Ikesi le-LTROP le-iPad lezingane
Ngokusobala icala elihle kakhulu le-iPad lezingane. Uma uthenge i-2020 ye-2020 ezosetshenziswa yintsha, i-Amazon & apos; s Choice LTROP iPad case izokwenza kahle ukuyivikela, kuyilapho i-kickstand yayo izoyigcina isetshenziselwe ukubukwa kalula. Kuza nesibambo sokuphatha ukuthuthwa okulula. I-lightweight ne-shockproof, evikela i-iPad ngenkathi inikeza ukuzijabulisa kwezingane.
I-LTROP New iPad 8th Generation Case
I-Shockproof, engasindi, inesibambo nestende
Ungase futhi ukuthole kuthakazelisa:
Ukubuyekezwa kwe-Apple iPad (2020)
Amacala nezembozo ezihamba phambili ze-Apple iPad (2020)
Idethi yokukhishwa kwe-Apple iPad Pro (2021), intengo, izici nezindaba
Idethi yokukhishwa kwe-Apple iPad mini 6 (2021), intengo, izici nezindaba
inikezwe lapho inqubo yokwamukela
igiya s3 vs iwashi lomthala
ikesi le-samsung galaxy s21 +
Icala le-Alleged Pixel XL 2 eliqhathaniswa nePixel yangempela ne-Galaxy S8 - yebo, inkulu
Ungabheki manje, kepha amaflip amafoni ayabuya
I-Boost Mobile inikeza ukusika i-MetroPCS yakho noma i-Cricket wireless bill ngesigamu
Ukubuyekezwa Kwamandla we-LG X
I-Amazon inama-smartwatch ama-Ticwatch apholile athengiswa ngezaphulelo ezinkulu
I-Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: ukuqhathanisa usayizi
Umhlaba ophakathi nendawo: IShadow of War iza kumadivayisi we-Android ne-iOS ngoSepthemba 28
I-Apple Watch SE: yonke imibala nokuthi yimuphi umbala we-Apple Watch SE okufanele uwuthole?
Cha, kungenzeka ukuthi awusebenzisi umuzwa wegciwane i-FaceApp ukuze uzenze ubukeke umdala